Faa'iidada iyo faa'iido darrada qowladda pachinko ee ratio raanta ah
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada qowladda pachinko ee ratio raanta ah
Marka aad tagto pachinko iyo Afyare, waxaan marka hore u malaynayaa in ay tahay ratio diinta ee ka welwelina ah. Common in qowladda pachinko ah, xaddiga kubada marka wax amaahisaan macaamiisha, mid ka mid ah 4 yen, waxa uu noqday hal bilad 20 yen ah. Sanadihii la soo dhaafay, Ichipachi iyo 5 yen Afyare, iwm, laakiin waxaa ka soo baxay xataa kubada amaah hooseeyo, ratio diinta waqtiga lacagta kubada iyo bilado saartay Si kasta ah, wuxuu noqday wax wanaagsan si xor ah ay go'aamiyeen qowladda pachinko kasta aad leedahay. Heerka lacagta caddaanka ah
, waa wax aad u muhiim ah go'aaminta siyaasada u hawlgasho tii pachinko ah. In
, in dukaamada sare-alaabo iyo dukaan yar dahableyaal, model lagu rakibay oo dhinaca dagaalka, iwm, waxaan doonayaa in aan arko nooca kala duwan yihiin waxaa ka mid ah. Sida macaamiisha ah, waxaan qabaa dabcan la dadkii lacagta caddaanka sare waa nice, xaqiiqda ah in uu u bedelo aad heshay waa at cabirku yahay diinta sare, waayo, dukaanka, oo aan wax ka badan oo ah ururinta mar dambe waa doono.
ka ganacsiga natiijo caadi ah, ciddiyaha noqdo adkaynaya muuqdaan, meel waxaa inta badan sidoo kale soo cabatay oo dhan-1. Xataa marka dhacdooyinka, iyo furitaanka ee ciddiyaha badan oo halkaas, ayaa sidoo kale ka dhigaysa in ay adag tahay in la kordhiyo goobaha dhexe, iskaba daa meel sare. qowladda Pachinko oo lacag caddaan ah sare, marka in yar si taxadar la'aan, waxaan lama kala fujin karo daryeel si degdeg ah noqon lahaa khasaare.
In gaaban, sababtoo ah waa mid aad u adag si ay u muujiyaan heshay ka, haddii aad eegto ka macaamiisheena, sidoo kale waxaan u malaynayaa in badan oo aan ka tagi lahaa Toka aan laga noqon. Sidaa darteed, in qowladda pachinko ee lacagta caddaanka ah ee sare, waxaan inta badan u dukaameystaan ??la gaar qotomiyey model badan loo yaqaan ee Creech sare. itimaalka hit Big waa heer sare ah, waxaa sidoo kale la filayaa maal lacagta badan ee lacagta.
Si kastaba ha ahaatee, xitaa marka ka dhanka macaamiisha ah u arkaan, Creech sare dukaanka-dahableyaal sare, waxay keenaysaa in guul weyn Haddii dalalkan kubada. qowladda Pachinko of furtay sare, lacagta maalgashi sidoo kale sii kordhaya waa wax yar, dhab ahaantii, jaaniska in ay ku guuleysato jaaniska in ay dib, sare kuu. Waxaa weli jira, waxaa faa'iido ugu weyn ee lacag caddaan ah sare. Ku Guuleystay ogyahay, haddii hit, waa inay u fiican yahay si ay ula dagaalamaan by fog ee qowladda pachinko oo lacag caddaan ah sare. qeybsanaan ku xigeenka
, dukaan yar dahableyaal, sida caadiga ah In ciddiyaha la sameeyo macaan sidoo kale ka, waxaa laga yaabaa ama jiro set dhexe ee Afyare. Tan iyo xawaaraha waa kasban, sare u jaaniska u soo jiidi hit weyn. Si kastaba ha ahaatee, xataa sida qaar badan oo ka mid ah heshay helitaanka, iyada oo ku xidhan xaddiga maal lacag, waxaad sidoo kale xaqiiqada ah in guul ka yar. In sida lacag caddaan ah oo hooseeyo qowladda pachinko, ciyaar ay fududahay in model kaas oo la sheegay in ay noqon macaan Details nooca digital iyo dhexe, waxay u muuqdaan in ay ku rakibi badan oo waxay noqon doontaa sare. doonayaa inaan u ciyaaro
, haddii xaqiiqda ah in doonayaa inaan ka dhaansado hit weyn, laakiin qowladda pachinko oo lacag caddaan ah u hooseeya waxaa lagu talinayaa, waxaan u malaynayaa in ay tahay arrin ku adag tahay inuu ku guuleysto weyn. In dukaanka lacag caddaan sare, guusha weyn waxaa la odhan jiray macaamiisha helay ii dhadhamin la kulmaan, dukaanka low-dahableyaal ah, waxaa lagu gartaa call macaamiisha codsaday in ay dhadhamiyaan dhexeeya gol leeyahay ka ciyaaro wax.
Sidaas, ratio diinta waa ay sabab u tahay kala duwan sida loo ciyaaro, ayaa aad dukaamo sidoo kale beddelay si ay u doortaan.
sarrifka u dhigma, saldhig xoog leh oo cabirku yahay diinta sare ee dukaanka, waa ku haboon yahay in aan ujeedadoodu tahay oo kaliya waqtiga wanaagsan dhibic pin ah. Qaadista saamiga qaab beddelidda, laakiin waxaa ay arrimuhu sidii hore oo dhan, dad badan oo sida goob dhexe, u muuqdaan in ay la geeyay ayaa waxaa caajis. Time ma aha wax tar badan in kasta oo ay dhibaato, waxa ay noqon doontaa sida a - si aan u noqdo waa in bytes of beertiisa maalintii. Maaddaama ay farqiga dhinaca quruxda, sidoo kale waxa uu ku bedelay dukaanka in ay doortaan.
sarrifka u dhigma, saldhig xoog leh oo cabirku yahay diinta sare ee dukaanka, waa ku haboon yahay in aan ujeedadoodu tahay oo kaliya waqtiga wanaagsan dhibic pin ah. Qaadista saamiga qaab beddelidda, laakiin waxaa ay arrimuhu sidii hore oo dhan, dad badan oo sida goob dhexe, u muuqdaan in ay la geeyay ayaa waxaa caajis. Time ma aha wax tar badan in kasta oo ay dhibaato, waxa ay noqon doontaa sida a - si aan u noqdo waa in bytes of beertiisa maalintii.